Nnwom 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn abɔde ne ne mmara di ne ho adanse
“Ɔsoro pae mu ka Onyankopɔn anuonyam” (1)
Onyankopɔn mmara a edi mu no ma ahoɔden foforo (7)
“Bɔne a mayɛ a minnim” (12)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Dawid dwom. 19 Ɔsoro pae mu ka Onyankopɔn anuonyam;+Ewim nneɛma bɔ ne nsa ano adwuma dawuru.+ 2 Adekyee biara, wɔkasa,Na anadwo biara, wɔma yenya nimdeɛ. 3 Wommue wɔn ano, wɔnte wɔn anom kasa,Na wɔnte wɔn nne nso. 4 Nanso yɛte wɔn nka wɔ* wiase nyinaa,Na wɔn nsɛm du asaase ano baabiara.+ Onyankopɔn asi ntamadan ama owia wɔ ɔsoro; 5 Ɛte sɛ ayeforokunu a ofi n’ayeforo dan mu repue;Edi ahurusi te sɛ ɔhoɔdenfo a ɔretu mmirika. 6 Ɔhyɛ n’akwantu ase wɔ ɔsoro ano,Na okowie wɔ ɔfã noho;+Ɔhyew a efi mu ba de, baabiara nni hɔ a entumi nnu. 7 Yehowa mmara di mu,+ na ɛma ahoɔden foforo.*+ Yehowa nkaesɛm nni huammɔ,+ ɛma nea onni nimdeɛ hu nyansa.+ 8 Yehowa ahyɛde teɛ, na ɛma koma di ahurusi;+Yehowa mmara nsɛm ho tew, na ebue nnipa ani.+ 9 Yehowa suro+ ho tew, na ɛwɔ hɔ daa. Yehowa atemmusɛm yɛ nokware; ne nyinaa teɛ.+ 10 Ɛyɛ akɔnnɔ sen sika kɔkɔɔ;Ɛsen sika kɔkɔɔ amapa* mpo.+Ɛyɛ dɛ sen ɛwo,+ ɛwo a ɛsosɔ fi ɛwokyɛm mu. 11 Ɛno na ɛbɔ w’akoa kɔkɔ;+Nea odi so no nya akatua kɛse.+ 12 Hena na otumi hu n’ankasa mfomso?+ Bɔne a mayɛ a minnim no, fa kyɛ me. 13 Hwɛ w’akoa na manyɛ aniammɔnho;+Mma ennni me so.+ Ɛba saa a, me ho remma asɛm,+Na mɛde me ho afi anidaho bɔne* ho. 14 O Yehowa, me Botan+ ne me Gyefo,+Ma m’anom nsɛm ne me komam nsusuwii nyɛ wo fɛ.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn susuhama du.”
^ Anaa “ɔkra ho san no.”
^ Anaa “mmarato pii.”